Qeda & Ukushisa Ukwelashwa - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining Co, Ltd ingenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Sidlulise isitifiketi se-ISO9001: 2015, okwamanje sinabasebenzi abangama-200.
Umkhiqizo wethu uthunyelwa eJapan ngama-20%, ama-60% athunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana. Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy, singanikeza nokwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende:
Ngemuva kweminyaka eyishumi yentuthuko, i-K-Tek ayinenani elikhulu kuphela labasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe neqembu elihle kakhulu labaphathi, kepha futhi uneqembu lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuze sivumele amakhasimende amaningi asazi, sihamba njalo emhlabeni ukuhlanganyela emibonisweni, njenge-United States, United Kingdom, Germany, Japan njalonjalo. Sazi inani elikhulu lamakhasimende avela embukisweni, ngasikhathi sinye, amakhasimende amaningi aphesheya eza ezovakashela ifektri yaseK-Tek futhi axoxa ngezindaba zokubambisana. Ukwesekwa kwakho kuyisikhuthazo esikhulu kithi. Siphinde sethemba ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zemishini kumakhasimende amaningi adinga usizo. Sikumema ngobuqotho ukuthi ubambisane futhi uthuthuke ndawonye.
Izinsizakalo zethu zokucubungula zifaka:
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Ukuvula；
2) I-EDM yokusika izintambo / i-WEDM-HS / WEDM-LS；
3) Ukugaya / Ukuguqula / Ukugaya.
Ukwelashwa kwethu kwendawo kufaka:
Precision metal yokuqedela:
Yenza i-Anodize (ejwayelekile / enzima)
I-Electroless Nickel (Inc.Black)
Plating yeZinc (Mnyama / Umnqumo / Luhlaza okwesibhakabhaka /……)
• Ukumbozwa Kokuguqulwa Kwamakhemikhali
Passivation (Insimbi engagqwali)
• I-Chrome Plating (Inc.Hard)
• Isilayidi Esiliva / Esigolide
• Ukuqhumisa isihlabathi
• ukufafaza impuphu
• Ukupholisha i-Electro
• Ukufakwa ngothayela
• Ukufaka i-galvanizing
• I-PVD njll.